Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Italia atahorana ho tratry ny aretina vaovao indray satria ny Italiana mivoaka any ivelany ho an'ny Paska » Page 2
Maria Carmela Colaiacovo, filoha lefitry ny Confindustria, dia manao fihetsiketsehana ihany koa ary mihevitra ny lalàna mifehy fa mifanohitra amin'izany. Hoy izy: "Ny rafitra Italiana dia vonona handray ireo vahiny amin'ny fiarovana feno izay misy fitsarana an-tendrony manoloana ity sehatra ity," raha jerena fa "ny trano faharoa an'ny Italiana dia azo tratrarina, fa ny trano fandraisam-bahiny izay mitohy ny fanaraha-maso dia tsy afaka. Toy izany koa ny fitsangatsanganana any ivelany. Azontsika antoka fa ny fijanonana ao amin'ny hotely any Italia dia afaka manome antoka toy izany, na dia tsy ambony aza. ”
Nefa hita fa natsipy ny maty, ary nanamarin-tena ny governemanta tamin'ny filazany fa "rehefa miverina dia takiana karantina sy buffer mandritra ny 5 andro."
Ny lalàna vaovao nosoniavin'ny minisitry ny fahasalamana Roberto Speranza dia milaza fa "buffer amin'ny fiainganana sy fiverenana, karoketra 5 andro ary buffer fanampiny." Mihatra amin'ireo rehetra miditra any Italia avy amin'ny Vondrona Eropeana ihany koa ny lalàna.
Misy fepetra toy izany manan-kery any amin'ny firenen-kafa, toa an'i Alemana sy Espana, ary niteraka resabe. Ohatra, ny hotely alemanina dia namariparitra ny zava-misy ho tsy mitombina izay ahafahan'ny mpiray tanindrazana an'arivony afaka manidina any Balearics mandritra ny fialantsasatry ny paska, raha mbola any an-trano kosa dia mihidy ny trano fandraisam-bahiny - afa-tsy ireo izay mandeha miasa.
Na izany aza, ny fikambanam-barotra Federalberghi, izay misolo tena ny orinasa hotely any Italia, dia tsy mankasitraka ny lalàna vaovao momba ny quarantine, izay mamaly an'i Ansa tamin'ny alàlan'ny filohany Bernabò Bocca izay nilaza hoe: “Ratsy noho ny lavaka ilay patch. Izahay dia tsy te-hiady amin'ny Italiana izay mandeha any ivelany na any amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany italianina sy ireo masoivohon'ny fizahan-tany izay tena dinihinay. Ny fomba fijerinay dia - raha manan-kery ny buffer amin'ny fandehanana any ivelany, dia tsy maintsy mihatra any Italia ihany koa izany. ”
Federalberghi dia nifanaraka tamina ivon-toerana diagnostika 2,000 bebe kokoa momba ny fivarotana hotely. "Raha avela hiondrana amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny tampon ianao dia avela ao amin'ny hotely ihany koa," hoy ny filohan'ny fikambanana.